“Waa in labadan shaqsi ay ku soo laabtaan kooxda Barcelona” – Xavi Hernández – Gool FM
Dajiye July 4, 2020
(Barcelona) 04 Luulyo 2020. Halyeyga kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Spain ee Xavi Hernández ayaa aaminsan fikrada ay Pep Guardiola iyo Carles Puyol markale dib ugu soo laaban karaan Blaugrana.
Guardiola ayaa ka tagay Barcelona 2012, kaddib afar xilli ciyaareed isku xigta uu tababare u ahaa kooxda, waxayna mudadaas ku guuleysteen tartan walba ee suurtogal ah, kahor inta uusan aadin Bayern Munich iyo Manchester City uu haatan ku sugan yahay.
Halka Carles Puyol uu ka fariistay ciyaarista kubadda cagta sanadkii 2014, qeybna ma uusan ka noqonin tan iyo xilligaas maamulka sare ee kooxda Barcelona.
Haddaba wargeyska “le10sport” ee dalka France ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay halyeyga Xavi Hernández waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waa in labadooduba ay ku soo noqdaan kooxda Barcelona, si loo arko haddii aan nasiib ku leenahay, miyey sax aheyn? waxay ila tahay inay rabaan inay soo noqdaan”.
“Puyol wuxuu ciyaari karaa doorka agaasimaha ciyaaraha ama xoghayaha farsamada ee kooxda Barcelona, ​​miyeysan sidaas aheyn? Pep Guardiola wuxuu kusoo laaban karaa qaabka uu doono”.
Hadalkan ayaa wuxuu imaanayaa xilli ay wararku sheegayaan in Barcelona ay dooneyso in Xavi Hernández oo haatan tababare u ah kooxda Al Sadd ay ka dhigato badelka Quique Setién, kaddib markii uu ku fashilmay in naadiga uu gaarsiiyo booskii la rabay.